Mabili Amaxoki othandweni – Maskandi Media
Mabili Amaxoki othandweni
Mzukulu – Mabili amaxoki idla lubi. Ithole ihlombe elikhulu i-album entsha kaMzukulu esihloko sithi Mabili amaxoki. Le album elindwe isikhathi esithi asibe side impela, ithe uma isifika yafika yayithola
indawo yaluthola nothando kubantu ngendlela esezingeni lomhlaba ngakhona. Lo mculi akawuvali umlomo ngendlela akathola izincomo njalo ezisuka kubalandeli nakwabanye abaculi.
Kuzwakale uKhuzani umfoka Mpungose emkhuphula uMzukulu enxusa abalandeli ukuthi besukume ngobuningi
babo beyothenga icwecwe lale nsizwa elisha ngoba likwelinye izinga. “Ngizonxusa abathandi bomculo enhla nasezansi, ikakhulu kuwona kanye amaBlue Nation ngithi niyazi zikhokho zami ukuthi uMzukulu ungaphansi kwe-IGP. Ngeke samlahla umfana ngoba uma simlahla sithi akacoshwe ubani maqede amsize ngani ngoba indaba ikwaGuqa”.
“Uma kungenzeka ezithole esecoshwa omunye umculi noma enye ikhampani iyomsiza ngani ngoba ikusasa liqhakazile kwaGuqa. Inkulu ingoma ekule nsizwa ngizizwele ngezami izindlebe”.
Uphethe kanjalo umfoka Mpungose ngesikhathi ebongisa uMzukulu ngengoma yakhe enkulu. Lo mculi owaduma kakhulu ngengoma yakhe eyashisa kakhulu yaze yasusa uthuthuva kanye namazondo kwabanye abaculi eyayithi Dali wami, ukhombise ukulenyusa kakhulu izinga.
“Ngibonga kubo bonke engisebenze nabo ukuze le album ibe impumelelo. Bese ngibonga nezincomo engizithola kubathandi bomculo kanye nabathandi bomculo wami ngithi ngiyabonga enhla nasezansi”.
“Ngibonga kakhulu kulabo abathenge ama-original ezitolo ezifanele zomculo ngoba phela ibona kanye abelungu bethu. Uma singena estudio sisukw singena bona. Umsebenzi wethu awulutho ngaphandle kwabo”.
” Bese ngingena kuyona qobo le album. Cha impela nami imbala ngimangele uma ngiyizwa ukuthi kanti ikuleli zinga Kwesinye isikhathi uyaye wenze into lukushaya uvalo uzibuza ukuthi kazi umgodi engazimbela wona ngizokwazi yini ukuphinda ngiwugqibe mina futhi. Le ngoba ethi Dali wami iyoa eyangithatha yangibeka la ngifuna ukukhuphuka”. Kusho uMzukulu.
Previous Previous post: Ubaphethe ngeyangonyaka odlule uMpungose
Next Next post: Lwabhuntsha uhambo lwaseKapa